सवारीसाधनका पार्ट्स र होशियारी
केही कारको ब्याट्री फेर्नुपर्दा साधारण पसलका तुलनामा डिलरसँग खरीद गर्दा यसको मूल्यमा २ गुणासम्म फरक पर्ने गरेको पाइन्छ । बजारमा विभिन्न ब्रान्डका ब्याट्री उपलब्ध भए तापनि अधिकांश सीमित ब्याट्री निर्मातामध्येकै हुने गर्छन् । कारका लागि आवश्यक क्षमता तथा गुणस्तरको ब्याट्री बाहिरबाटै खरीद गर्दा डिलरको तुलनामा कम मूल्य पर्छ । तर, यसरी खरीद गर्दा कारमा आवश्यक गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा मापदण्डमा भने विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।
२. मोटर आयल
केही डिलरले कारकै ब्राण्ड वा लोगो अङ्कित मोटर आयल विक्री गर्ने गरेका छन् । अधिकांश कार निर्माता कम्पनीले यस्ता आयल आफै उत्पादन गर्दैनन् । मोटर आयलका विश्वसनीय ब्राण्डसँग आफ्नो कारका लागि निर्धारित (म्यानुअलमा उल्लेख गरिएको) गुणस्तर भएको आयलको खरीद गरी प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । यसबाट पैसा बचत त हुन्छ नै, समयसमयमा आयल परिवर्तन गर्दा कारको आयु पनि लम्बिन्छ ।
समयसमयमा कारमा जडान गरिएका लाइट÷बल्बहरू जल्ने वा बिग्रिने भइरहन्छन् । त्यसैले, यस्ता यस्ता सामग्री डिलरमार्फत खरीद गर्दा महँगो पर्ने सम्भावना हुन्छ । साधारण ‘ह्यालोजन’का बत्ती ‘जिनोन’का बत्तीका तुलनामा सस्ता हुन्छन् । साथै, डिलरबाट भन्दा अटोपार्ट्स बेच्ने पसलबाट यसको खरीद गर्दा मूल्य धेरै सस्तो पर्ने कतिपय प्रयोगकर्ताको अनुभव छ । तर, सस्तो पाइयो भन्दैमा गुणस्तर नै नभएको भने खरीद गर्नु हुँदैन । यसो गरिएमा समयान्तरालमा ठूलै जोखीमको समेत सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले, यस्ता सामग्रीको खरीद गर्दा सस्तो तर गुणस्तरीय उत्पादन रोज्नु आवश्यक छ ।
सामान्यतया डिलर तथा साधारण टायर विक्रेताले एकै किसिम तथा गुणस्तरका टायर बेच्ने गर्छन् । तर, डिलरहरूले आफ्नो नाफा बढाउन महँगा ब्रान्डका टायर बेच्ने गरेको प्रयोगकर्ताको गुनासो रहँदै आएको छ । यसका लागि बजारमा रहेका विश्वसनीय ठूला टायर चेनस्टोरमा गई मूल्यका लागि ‘प्राइसकोट’ संकलन गर्न पनि सकिन्छ । डिलरमार्फत खरीद गर्नुभन्दा बाहिरका पसलबाटै टायर खरीद गर्नु सस्तो पर्ने र गुणस्तरमा समेत कमी नहुने उपभोक्ताहरू बताउँछन् । तर, अन्य सामग्री खरीद गर्दा झैं यसमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । आफू अन्योलमा भए कुनै जानकार व्यक्तिको रायसुझाव लिन पछि पर्नु हुँदैन ।
५. कार कभर
बढ्दो ताप तथा बदलिँदो वातावरणका कारण कारको पेण्ट तथा भित्री सजावटमा खराबी आउन सक्छ । त्यसैले, यसबाट जोगिन कार कभरको प्रयोग गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । डिलरमार्फत खरीद गर्दा तपार्इंकै कारका लागि विशेष किसिमले तयार गरिएको कार कभर पाउन सक्नुहुन्छ । यो तपाईंको कारमा सजिलैसँग जडान गर्न सकिन्छ । साथै, कारको आकर्षक लोगोसमेत यसमा राखिएको हुन्छ । तर, कम्पनीको उक्त लोगोले तपाईंको कारलाई अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान भने गर्दैन । तथापि, लोगोकै आधारमा बजारमा उपलब्ध अन्य ब्राण्डका कार कभरका तुलनामा यो केही महँगोसमेत हुने गरेको पाइएको छ । डिलरबाहेक बजारका अन्य स्थानमा पनि उच्च गुणस्तरका कार कभर पाइन्छ ।